Wzọ 15 Na-eto Eto Email Gị | Martech Zone
Uto, uto, uto… onye obula n’ile anya inweta ndi ohuru ohuru, ndi n’eso uzo ohuru, ndi obia ohuru, ohuru .. ohuru. Kedu maka ndị ọbịa gị dị ugbu a? Kedu ihe ị na-eme iji melite ohere iji mee ka ha bịarukwuo gị na azụmahịa. Anyị emehiela onwe anyị… na-achọ ịchọ mma karịa, nkwalite, ịbawanye mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nsonaazụ a na-abụkarị ndị ọbịa na saịtị ahụ mana ọ bụchaghị ego na-enwetaghị. Na-eto eto listi email gị kwesịrị ịbụ usoro bụ isi maka usoro ịntanetị gị.
N'ime afọ ole na ole gara aga, uche anyị agbakọọla ndị na-eso ụzọ ya na ndị na-eso ụzọ ya anya ma kwaga ndị na-ajụ ase - ọkachasị ahịa email. Ndepụta anyị na-aga n'ihu na-eto ma ọ bụ na a ndị debanyere aha 100,000. O were anyị afọ iri iji ruo ebe ahụ mana, enweghị obi abụọ, ọ bụ ego kachasị mma anyị meworo. Mgbe m zipụrụ ozi-e, ọ na-abata nye anyị ego kpọmkwem ma ọ bụ na-eduga na ụlọ ọrụ ndị anyị na-atụle. N'oge na-adịbeghị anya, Shel Israel na Robert Scoble kelere m maka mpi ha hụrụ n'ahịa akwụkwọ ha mgbe akwụkwọ akụkọ anyị kwa izu na-apụ.
@onyedikachi_ Anyị na-ahụ ihe uptick na ahịa, Doug. Thx si @igbochukwuigbo na m.
- Israel ndukwe (@nkechih) October 15, 2013
Na-eto eto listi email gị dị ezigbo iche na ịgbakwunye Fans ma ọ bụ ụmụazụ. Inwe onye obia na-enye gi ohere ịbanye na igbe mbata ha bụ ihe ịrịba ama kachasị nke ntụkwasị obi. Ọ bụ ntụkwasị obi na ekwesighi mmegbu, mana ekwesiri ilebara ya anya. Ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike ime ka ndị mmadụ gaa na saịtị gị ma ịnweghị ụzọ ịdenye aha, ị na-ahapụ ego na tebụl maka ụlọ ọrụ gị. Mgbe ndị folki laghachi na saịtị gị ugboro ugboro, ha ga-edebanye aha mgbe ha chere na uru bara na ndenye aha ahụ.
Na-eto eto listi email gị achọkwa ịrụsi ọrụ ike. Ndị na-enye ọrụ email na-akwa emo mgbe ha na ụlọ ọrụ na-etolite ndepụta ha ngwa ngwa maka egwu nke imebi mbibi ha niile. Anyị na ụfọdụ ndị na-ere ahịa alụ ọgụ n’ihi na ha chọrọ ịkwụsị ikike anyị ịgbakwunye na ndepụta anyị. Ha na-eche na ị bụ onye spam mgbe ị na-ebubata ndị debanyere aha puku - ọ bụghị na ị nwere ntinye na webinar ị na-agbakwunye.
Lee ọtụtụ echiche ndozi ụlọ na njigide GetResponse nke ahụ ga - enyere gị aka nweta nsonaazụ kacha mma site na mmemme ahịa email gị niile. GetResponse nwere a 15% mbelata ndụ ọ bụrụ na ịdebanye aha na njikọ njikọ anyị. Ha nwere ọtụtụ narị ndebiri ndebiri na ihu igwe siri ike nke dị mfe maka onye ọ bụla iji.
Nye Uru - Kwa izu, anyị na-ekerịta ọkwa ọhụrụ anyị yana ozi pụrụ iche na ndị debanyere aha anyị. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ ego, mgbe ụfọdụ ụfọdụ ndụmọdụ siri ike nke ndị na-ege anyị ntị nwere ike iji mee ihe. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ na onye ọ bụla debanyere aha na-achọta ihe bara uru na email ọ bụla anyị zigara.
Msdị ndebanye aha - Ọ bụghị mma, mana nkwụsị anyị na saịtị anyị na-enweta anyị ihe karịrị ndị debanyere aha ọhụrụ 150 otu ọnwa! Anyị nwekwara a denye aha peeji. Anyị anwalela ụdị popping n'etiti ihuenyo ma nwee nnukwu nsonaazụ - mana m ka nọ na ngere banyere ịbụ onye na-egbochi.
Ntinye aka nke Social - Tinye ụdị ntinye aka na ibe Facebook gị ma nye ndị na-akwado gị na ndị na-eso ụzọ gị ohere ịdebanye aha oge ọ bụla. Anyị na-anwa ịkwapụ ya ihe dị ka otu ugboro n'ọnwa.
Mee ka ọ dị mfe - Ajụla maka otu ubi address adreesị ozi-e na aha bụ mmalite dị ukwuu. Mgbe ndị folks na-ahọrọ na onyinye ndị ọzọ ị nwere ike ịrịọ maka ozi ndị ọzọ. Ndebanye aha email gị adịghị ka onye na-achọ isoro gị zụọ ahịa, ha na gị na-arụ ọrụ karịa. Atụla ha ụjọ!
amụma nzuzo - Mee ka ndị na - agụ akwụkwọ gị mata na ha nwere ntụkwasị obi na ị gaghị ekenye ndị ọzọ ozi ha. Easiestzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ ịtọlite ​​websaịtị nzuzo amụma nzuzo ma nye njikọ ya na ya n'okpuru ụdị opt-in gị. Ọ bụrụ na ịmaghị ede otu, enwere ụfọdụ nnukwu Nzuzo ndị na-emepụta amụma nzuzo online.
n'omume - Mee ka ndi mmadu hu ihe omuma atu nke akwukwo ozi gi! Anyị na-ebipụtakarị njikọ na akwụkwọ akụkọ ikpeazụ anyị mgbe anyị na-akwanye ndị mmadụ ịdenye aha na mgbasa ozi mmekọrịta. Mgbe ha hụrụ ya, ha na-ama ihe ha ga-atụ anya ya ma banye.
Archive - Inwe akwukwo akwukwo nke akwukwo ozi na akwukwo ndi gara aga na-adi nma ma na-abara ndi obia uru ma wulite ntụkwasị obi gi dika ikike. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na edere isiokwu gị na usoro SEO dị mma n'uche, ha nwere ike ịbawanye okporo ụzọ na weebụsaịtị gị site na ntinye njin ọchụchọ.
Nwee onyinye - Ọ bụrụ na otu n’ime ndị na-akwado anyị nwere ego ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ, anyị ga-eji nke ahụ rata ndị na-ahọrọ ka ịbanye na akwụkwọ akụkọ ọzọ iji nweta uru nke onyinye ahụ. Inye uru ndị a ga - eme ka ndị debanyere aha gị tinye aka!
Okwu Ọnụ - nye njikọ na email gị ebe ndị debanyere aha gị nwere ike ịkekọrịta akwụkwọ akụkọ gị na netwọkụ ha. Okwu ọnụ bụ ụzọ dị ike iji tinye ndị debanyere aha!
Kekọrịta Ọdịnaya Gị - ikesa ọdịnaya gị na ntanetị ndị ọzọ bụ ụzọ dị mma iji dọta ndị na-ege ha ntị na listi ahịa email gị. Ndị folks na-achọkarị ịkekọrịta oke ọdịnaya - nye nke gị ma mee ka ha nye njikọ njikọta ebe ndị folks nwere ike ịdebanye aha maka ihe ndị ọzọ!
Debanye aha - inwe bọtịnụ ntinye aha abụghị naanị ihe dị mkpa na saịtị gị, ọ dị mkpa na email gị ka ebugharịrị ndị ọzọ. Jide n'aka na ị nwere bọtịnụ ntinye aka na akwụkwọ akụkọ ọ bụla na-apụ!
Gbanwee ọzọ - Mgbe ndị mmadụ debanyere aha na peeji ọdịda, gbakwunye okwu, ma ọ bụ soro gị na ebe ọ bụla na saịtị gị, ị na-enye ụzọ iji pụọ na listi ahịa email gị? Ị kwesịrị!
nleba - Gụnye akaebe na ịdenye aha gị ma pịgharịa peeji. Nke a dị oke mkpa. Tinye nkwenye siri ike ma ọ bụ abụọ sitere n'aka ndị ahịa nwere afọ ojuju na ibe gị. Iji nwekwuo nkwenye, nweta ikikere iji aha ndị ahịa, ọnọdụ na / ma ọ bụ URL ndị ahịa (Ejila 'Bob K, FL').
Blog okpukpe - gingde blọgụ bụ ụzọ dị mma iji kwurịta okwu na atụmanya yana ndị ahịa, ma mepụta mmekọrịta dị mma na azụmaahịa email gị. Gbalia itinye akwukwo ntinye aka gi na ibe gi.
Ihe kachasị mkpa # 15 bụ onye kachasị egwu anyị. Soro ndi otu ndi ozo na aru oru nye ndenye aha gị. Mgbe anyị na onye ahịa na-arụ ọrụ na webinar, anyị na-enye ndenye aha n'oge ndebanye aha. Mgbe anyị na-ekwu okwu na ihe omume, anyị na-enye ndị folks ohere ịdebanye aha na slides anyị. Ọbụna anyị na-enye ikike ịdebanye aha gị site na SMS - ọ bụ nnukwu ụzọ iji nweta ndị folks abanye!
Tags: ndebanye aha emailtoo ahia emailtoo ndepụtatoo ndenye aha ndeputatoo ndepụta gị
Echiche 7gha asaa nke Email Marketing
email email bụ otu n'ime ụzọ iji mee kpọmkwem ahịa na ịnakọta atụmanya na ndị ahịa n'ụwa niile. Ọ bụ ụzọ dị irè iji bulie ahịa gị
Feb 1, 2014 na 3:30 PM
Anyị anwalela ụdị popping n'etiti ihuenyo ma nwee
nnukwu nsonaazụ - mana m ka nọ na ngere banyere ịbụ onye na-egbochi.